ड्रोनको प्रयोग किन र कहाँ ? « Farakkon
ड्रोनको प्रयोग किन र कहाँ ?
आजको विश्व विज्ञान प्रविधि र टेक्नोलोजीको हिसाबले अत्यन्त अग्रपंक्तिमा छ । विज्ञान प्रविधिको र टेक्नोलोजीको यति धेरै विकास भएको छ, कि जसका कारण विश्व नै एउटा सानो घरपरिवारमा परिणत भएको छ । एउटा देशको एउटा कुनामा उत्पादित वस्तु तथा सेवा विश्वको अर्को देशको कुनासम्म सहजै पु¥याउन प्रचार–प्रसार निकै सहज भएको छ ।
प्रविधि तथा टेक्नोलोजीको विकासले मानिसहरुका आधारभूत आवश्यकतादेखि अन्य विलासिताका आवश्यकताहरु पनि सहज तरिकाले पूरा गर्न सक्षम भएका छन् । विज्ञान प्रविधि विकासमा ड्रोन प्रविधि पनि एक नवीनतम् प्रविधि हो ।
आज केही ड्रोनको बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
नेपालमा ड्रोन कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने त ?
१- ड्रोन फोटोग्राफी, भिडियोग्राफीबाट यहाँका सुन्दर तथा मनोरम स्थानको चर्चा विश्वसामु पु¥याउन सकिन्छ र भर्चुवल टुरिजममा पनि यसलाई प्रयोग गर्ने सकिन्छ ।
२- औषधि, रगतजस्ता अत्यावश्यक स्वास्थ्यका आधारभूत आवश्यकताहरुलाई नेपालका विभिन्न दुर्गम ठाउँहरुसम्म, जनताको सहजता पहुँचसम्म पु¥याउन ड्रोनको यस्ता अत्यावश्यक कुरालाई सजिलै पु¥याउन सक्दछ ।
३- प्राकृतिक प्रकोपको हिसाबले निकै जोखिममा रहेको नेपालमा कुना समयमा, कुन विपत्ति आउन सक्दछ पत्तो हुँदैन । यस्तो घट्ना घटेको ठाउँहरुमा खानेपानी, औषधि, सुरक्षा पाउन कठिन हुन्छ र पीडित मानिसको खोजी गर्ने पनि गाह्रो पर्दछ । ड्रोनले ति आवश्यक वस्तुको वितरण गर्ने र मानिसहरुको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन्छ ।
४- कृषि प्रधान देशको रुपमा चिनिने नेपालमा ड्रोनको प्रयोगले सहज र सरल तरिकाले उत्पादन बढाउन सकिन्छ । ड्रोन तथा सेन्सरको प्रयोगले ठूलो क्षेत्रफलमा कम समयमै निरीक्षण गर्ने, बिउ रोप्न , रोग लागेको पहिचान गर्ने, औषधिको प्रयोग गर्ने आदि कार्यमा सहजता ल्याउन सकिन्छ ।
५- ड्रोनलाई सूचना र सञ्चारको साधनको रुपमा पनि प्रयोग गर्ने सकिन्छ । संवेदनशील तर अत्यआवश्क चिठीपत्रहरु जनताले टाढा हिडेर लिनुपर्ने महत्वपूर्ण कागजातपत्रहरु हरेक ठाउँसम्म ड्रोनको माध्यमबाट सहजै पु¥याउन सकिन्छ । फलस्वरुप सहज र सुलभ तरिकाले सूचनाको आदान–प्रदान गर्ने सकिन्छ ।
६- अहिले देश संघीयतामा गै सकेको परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय सरकारले ड्रोनको माध्यमबाट आफ्नो क्षेत्रको काम कारवाही अवलोकन गर्ने कर्मचारीलगायत अन्य पदाअधिकारी आदिको काम अवलोकन गर्ने, विकास निर्माणका कामहरुको प्रगति विवरण अध्ययन गर्ने आदि कामलाई सहज र सरल गर्न सकिन्छ ।
७- ड्रोनको माध्यमबाट गस्तीमा, दुर्घटना भएको स्थानमा ट्राफिक निरीक्षण, अनुगमन, वनजंगलको निरीक्षण, चोरी तस्कर नियन्त्रण गर्न पनि सकिन्छ ।